के हो, कसरी र कहिले समुद्री हावा बन्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले आफ्नो छालामा समुद्री बतास हेर्नु भएको छ र यो कसरी बन्छ र यो किन भयो भनेर तपाईंले सोच्नुभयो। दिन र रातको बीचको तापक्रमको भिन्नताले पृथ्वी र पानी दुबै निरन्तर न्यानो र चिसो हुँदैछन्। जब सतहमा हावा दिनको भन्दा सामान्य भन्दा बढी गरम हुन्छ, माथिको वायु धाराले समुद्री हावा बन्छ।
के तपाई समुद्री हावाको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ?
1 यो कसरी गठन हुन्छ?
2 ती कहिले गठन हुन्छन्?
3 समुद्री हावाको विशेषताहरू
4 टापु र मानसुन
यो कसरी गठन हुन्छ?
समुद्री हावालाई भेराó भनिन्छ। दिन र रातको बीचको तापक्रमको भिन्नताका कारण सतह चक्रवाती तातो र शीतल हुन्छ। यसले पृथ्वीको सतहलाई निम्त्याउँदछ, जब यो सामान्य भन्दा बढी माथि ताप्छ र समुद्रको सतह भन्दा पहिले यो गर्छ, तातो, बढ्दो वायु धारा उत्पन्न गर्नुहोस्।
तातो हावामा माथि उठ्ने बित्तिकै यो समुद्र सतह भन्दा न्यानो भएकोले यसले कम दबावको खालीरा छोड्दछ। तापक्रम बढ्दै जाँदा हावा उच्च र माथि उठ्छ र चिसो हावा समुद्रको सतहको नजिकमा उच्च दबावको साथ एक ठाउँ छोड्छ, जसले बनाउँछ हावाले छोडेको खाली स्थानमा कब्जा गर्न चाहन्छ जुन उठेको छ। तसर्थ, सागरमा उच्च चापको साथ हावा मास भूमि नजिकै अवस्थित तल्लो दबाव क्षेत्र माथि सर्न जान्छ।
यसले समुद्रको सतहबाट हावा किनारमा प्रवेश गर्दछ र चिसो हुने गर्मीमा यो अधिक रमणीय हुन्छ, तर जाडोमा चिसो।
ती कहिले गठन हुन्छन्?
समुद्री हावाहरू कुनै पनि समयमा फार्म। सूर्यको तापक्रम समुद्रको सतहको वरिपरि हवा भन्दा ठुलो तापक्रममा ताप्न आवश्यक छ। सामान्यतया कम हावाको साथ दिनहरू, त्यहाँ धेरै समुद्री हावा पनि हुन सक्छ, पृथ्वीको सतह अधिक warms पछि।
सबै भन्दा रमाइलो हावा वसन्त र ग्रीष्म areतुमा बग्दछ भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद दिन्छ जुन सूर्यले जमिनको सतहलाई बढी तातो पार्छ र जाडोदेखि पानी अझै पनि चिसो छ। उपयुक्तता प्रभावको कारण समुद्रको तापक्रम बढ्ने बित्तिकै समुद्री हावाहरू अझ निरन्तर हुनेछन्।
समुद्री बतासले चलाएको हावाको बल तापमान कन्ट्रास्टमा निर्भर गर्दछ। दुबै सतहको तापक्रम बिच ठूलो अन्तर, हावाको गति जति उच्च हुन्छ, किनभने त्यहाँ धेरै हवा छ जुन तातो हावाको उदाईले छोडेको कम दबावको अन्तरलाई बदल्न चाहन्छ।
समुद्री हावाको विशेषताहरू
समुद्री बतासले समुद्री किनार तिर लम्ब्याउँछ र पुग्न सक्षम छ २० माईल टाढा समुद्रमा। जमिन र समुद्री सतहहरूको बिचमा कडा तापक्रमको बिरुवा आवश्यक हुनाले समुद्रको हावाको अधिकतम बल दिउँसोपश्चात हासिल हुन्छ, जब घामले अत्यन्तै शक्तिशाली ताप दिन्छ। हावाको गति पनि इलाकाको ओग्राफीमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि तिनीहरू सामान्यतया हल्का र रमाइलो हावा हुन्, यदि वाँट छन भने, हावा २ 25 समुद्रीतट सम्म पुग्न सक्छ।
कहिलेकाँही, पृथ्वीको तापक्रम र समुद्रबाट वरपरको हावाले ल्याइएको बलियो आर्द्रताभन्दा माथि उठेको संवन्ध, ठाडो रूपमा विकसित बादलहरू (कम्युलोनिम्बस भनिन्छ) बनाउँछ जसले वायुमण्डलीय अस्थिरताको अवस्थालाई जन्म दिन र बलियो बिजुली तूफान उत्पादन गर्न सक्छ। छोटो समयमा ठूलो वर्षा। यो केहि प्रख्यात ग्रीष्म तूफान को उत्पत्ति हो: ती मात्र २० मिनेट मा, एक जलमार्ग पछाडि छोड्छ कि गम्भीर क्षति हुन सक्छ।
टापु र मानसुन
यी टापुहरूमा सम्पूर्ण समुद्री किनारमा समुद्री बतासको प्रभाव पनि छ। सामान्यतया, तिनीहरू दिउँसो पछाडि पनि शिखर हुन्छन्। यसले कारण दिन्छ कि एch्कर डु boats्गामा सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँहरू डाउनविन्ड हो र समुद्री बतासले उडाउँदैन वा कमजोर छ भन्ने ठाउँमा भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ।
समान प्रभावको साथ जसले समुद्री बतासलाई जन्म दिन्छ, केही मानसूनहरू गठन हुन्छन्। बढ्दो तातो हावाले छोडेको कम चापी क्षेत्रको चिसो हावामा यो प्रभावले ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्‍यो, वायुलाई बढी शक्तिशाली बनाउँदछ र धेरै खतरनाक र खतरनाक ठाडो रूपमा विकास गर्ने बादलहरू बनाउँछ। यी बादलहरूले प्रशस्त वर्षा त्यस्तै छोड्छन् हिमालयको नजिकका क्षेत्रहरूमा मानसून।
ग्रीष्म outतुमा, दक्षिणपूर्व एशियाको हावा जनता तापक्रम र माथि उठ्दछ र पृथ्वीको सतहमा कम दबाबको क्षेत्र छोड्छ। यो क्षेत्र समुद्री सतहबाट चिसो हावाले बदलियो जुन हिन्द महासागरबाट चिसो आएको छ। जब यो हावा न्यानो क्षेत्रको सम्पर्कमा आउँदछ, यो अग्लो पहाड क्षेत्रमा पुग्छ र माथिल्लो क्षेत्रमा र शीतल नभएसम्म यसको आरोहण शुरू गर्दछ, धेरै वर्षाको कारण दिन्छ।
हामीले टेरालको नाम राख्यौं किनकी यो समुद्री हावासँग सम्बन्धित छ, यद्यपि यसको स्थिति र प्रभाव बिल्कुल विपरीत छ। रातको समयमा, पृथ्वीको सतह चिसो छ किनकि सूर्यले कुनै प्रकारको प्रभाव प्रयोग गरिरहेको छैन। यद्यपि समुद्रको सतहले घामको उज्यालो दिनबाट दिनभरि ताप्न सक्ने तातो संरक्षण गर्छ। यस अवस्थाले हावालाई विपरित दिशामा उडाउन दिन्छ, त्यो हो भूमिबाट समुद्रमा। यो हुन्छ किनकि समुद्री सतहको नजिकको हावाको तापक्रम भूमि सतहको तुलनामा अधिक हुन्छ र कम वायुमण्डलीय चापको साथ क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ। तसर्थ, पृथ्वीको सतहमा चिसो हावाले कम दबावको त्यो क्षेत्र कभर गर्न चाहन्छ र भूमध्यसागर दिशामा समुद्री हावा उत्पन्न गर्दछ।
जब भूमिबाट चिसो हावाले समुद्रको सतहबाट न्यानो हावा भेट्छ, यो बनिन्छ टेराल भनेर चिनिन्छ। चिसो हावा समुद्रमा उडिरहेको छ।
यस जानकारीको साथ, यो निश्चित छ कि यो स्पष्ट छ कि समुद्री हावा किन हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » समुद्री हावा
इक्वेडरले १ 54 .० देखि यता gla 1980% हिमनदी गुमाएको छ